प्रचण्डलाई एकपछि अर्को गरी पछार्ने कानुनची कोको हुन् ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
प्रचण्डलाई एकपछि अर्को गरी पछार्ने कानुनची कोको हुन् ?
२०७७ चैत्र २०, शुक्रबार १३:३६:००
काठमाडाैँ। एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा संसदमा अहिलेको जस्तै तनावपूर्ण अवस्था थियो । बजेट पेस नै गर्न नसकिने चिन्ता थियो । मन्त्री पाण्डेले केही कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरे, यो अवस्थाबाट कसरी पार पाउन सकिएला
केही वरिष्ठ वकिलले राय दिए, बजेट त टुँडीखेलमा पेस गरे पनि हुन्छ । किन आत्तिनुभएको बजेट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने हो, जहाँ गरे पनि हुन्छ ।पाण्डे मुसुक्क हाँसे । उनलाई थाहा थियो, वकिलले तर्क गर्ने हो । तर्कले सधैँभर काम गर्दैन । कहिलेकाहीँ त तर्कले डुबाउँछ पनि ।
उनले निक्र्योल गरे, यो वकिलको मामिला होइन । यो त राजनीतिज्ञको मामिला हो । राजनीतिक तहमै उपाय खोज्नुपर्ने विषय हो । उनको ब्रम्हले भन्यो, बजेट त संसदमै प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सांसदहरु टुँडीखेलमा भेला भएका बेला बजेट प्रस्तुत गरेर त्यसले बजेटको मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसैले संसदीय प्रक्रिया पूरा अवलम्बन गरेर नै बजेट ल्याउनुपर्छ ।
त्यसपछि उनी राजनीतिक तहमै वातावरण बनाउन लागे । त्यसमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङलाई पनि भूमिका खेल्न आग्रह गरे । नेम्बाङले विपक्षी र असन्तुष्ट पक्षसँग पुलको काम गरे । कुरा मिल्यो । सरकारले बजेट ल्याउने, विपक्षीले विरोध गर्ने । विरोध गरे पनि बजेट वक्तव्य नरोक्ने । बस् । दुवैको उद्देश्य पूरा भयो । वकिलको भनाइमा लागेका भए पाण्डे त्यतिखेर त गिज्याइन्थे नै, इतिहासमा पनि सबैभन्दा आलाकाँचा अर्थमन्त्रीमा दर्ज हुन्थे ।
वकिलहरुलाई राजनीति चलाउन दिँदा के हालत हुन्छ रु अहिलेका प्रचण्डलाई हेरे पुग्छ । वकिलहरुले जेजे तिगडम सुझाउँछन्, प्रचण्ड त्यही गर्छन् । अनि हरेक कदमपछि उनी खाल्डामा पर्दै गएका छन्।
वकिलले बढीमा बुझ्ने भनेको मुद्दा हो । मुद्दामा पक्ष–विपक्ष हुन्छ । हारजित हुन्छ । तर, राजनीतिमा सधैँ पक्ष वा विपक्ष हुँदैन । सधैँ सबै मुद्दामा हारजित पनि नहुन सक्छ । कतिपय यस्ता उपाय पनि हुन्छन्, जहाँ दुवै पक्षको जितैजित पनि हुन सक्छ । कतिपयमा दुवै पक्षले हार्न पनि सक्छ ।
राजनीतिमा २ मा २ जोड्दा कहिले ५ भइदिन्छ त कहिले शून्य पनि हुन सक्छ । यही कारण राजनीतिलाई असीमित सम्भावनाको खेल भनिन्छ ।समकालीन नेताहरुमा यो कुरा बुझ्नेमा प्रचण्ड नै सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा प्रचण्ड एकपछि अर्को गरी खुम्चिँदै गएका छन् । उनको राजनीतिमा सिर्जनशीलता हराउँदै गएको छ । लाग्छ, उनी आफ्नो विवेकले चलिरहेका छैनन् । उनलाई अरु कसैले चलाइरहेको छ । र, उनलाई चलाउनेको दिमागी विश्लेषण निकै सीमित छ ।
प्रचण्डले अहिले वकिलको बढी भर गरेको देखिन्छ । त्यसैले उनी जे समस्या आए पनि अदालततिर कुदिहाल्ने गरेका छन् । अदालत कुद्ने बानी यसरी लागेको छ कि एकपटक अदालतले आफ्नो दृष्टिकोण दिइसकेपछि पनि उनी त्यही विषय लिएर फेरि अदालत पुग्छन् । र, धोका खाएर फर्किन्छन् ।
धोकाको यस सिलसिलामा पछिल्लोपल्ट नेकपा ब्युँताउने अपेक्षा जोडिएको छ । माओवादी र एमाले मिलाएर बनाइएको नेकपा नामको दल अदालतले खारेज गरिदियो । उही नामको दल पहिला नै दर्ता भइसकेकोले यसको एकता प्रक्रिया नै नपुगेको, यदि एकता चाहने हो भने प्रक्रिया पुर्याएर निर्वाचन आयोग जाऊ, नभए पूर्ववत् बस्न स्वतन्त्र छौ भनेर स्पष्ट भनिसकेका मुद्दामा प्रचण्ड आनका तान तर्क जोडेर अदालत पुगे । अदालतले उनको दावी अस्वीकृत मात्र होइन, खारेज नै गरिदियो । हात लाग्यो शून्य ।
राजनीतिक रुपमा मिल्ने हो भने अदालतले रोकेर पनि रोक्न सक्दैन, एमाले र माओवादीबीचको एकता । तर, राजनीतिक रुपमा मिल्दैनन् भने कानुनी रुपमा कसरी एक भइरहन्छन् यो सामान्य राजनीतिक समझ भएको व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा हो । तर, प्रचण्ड बुझिरहेका छैनन् वा बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डले कानुनचीको इशारामा राजनीति चलाउन खोज्दा जसरी एकपछि अर्को धोका खाइरहेका छन्, त्यसैगरी उनले आफ्ना वास्तविक शत्रु वा मित्र पहिचान गर्न नसक्दा पनि सडकमा पछारिँदै गएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वास्तवमा उनका शत्रु थिएनन् । बरु ओलीविरुद्ध उचालेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन चाहने माधव नेपालहरु उनलाई दुरुपयोग गर्न चाहन्थे । ओली र प्रचण्डको कुरो मिलेसम्म नेपालले नेकपामा कुनै भूमिका पाउनेवाला थिएनन् । त्यहीकारण ओली र प्रचण्डको एकता एवं विश्वास भत्काउनुपरेको थियो । नेपालले ओलीविरुद्ध प्रचण्डलाई भरपूर प्रयोग गरे । अन्ततः नेपाल आफू पनि रछ्यानमा पुगे, प्रचण्डलाई पनि पुर्याएरै छाडे ।
डाक्टरकहाँ लानुपर्ने बिरामीलाई कन्डक्टरको जिम्मा लगाउँदा जे हुन्छ, अहिले प्रचण्डको राजनीतिक जीवनमा पनि त्यही भइरहेको छ । बिमार राजनीतिको छ, उपचार अदालतमा गएर खोज्दै छन् ।